गाउँपालिकामा गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : अध्यक्ष केसी – Vision Khabar
। १९ फाल्गुन २०७४, शनिबार ११:५२ मा प्रकाशित
–कृष्णबहादुर केसी (अध्यक्ष), जुनीचाँदे गाउपाँलिका, जाजरकोट
जाजरकाेट । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका कृष्णबहादुर केसी भारी मतका साथ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । हाल जिल्लाका स्थानीय तहहरु मध्ये सबै भन्दा पछाडि परेको अति दुर्गम जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच कम भएको स्थानीय तह मध्ये एक जनप्रतिनिधि हुन कृष्णबहादुर केसी । योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै गत साउन २८ गते गाउँ सभाले बजेट बिनियोजन गर्नुका साथै नयाँ निति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय आयोजक समितिका सदस्यसमेत रहेका केसीसंग समग्र बजेट, र आगामि योजनाका बिषयमा रहेर भिजन खबर अनलाइनका सम्बाादाता रेशम बहादुर खड्काले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
१ जुनिचाँदे गाउँपालिका अहिले के गरिरहेको छ ?
जुनिचाँदे गाउँपालिका राज्यको पुनःसंरचना अनुरुप निर्मित स्थानीय तह संरचित हँुदा घोषणा भएको नयाँ एउटा जाजरकोट जिल्लाको गाउँपालिका हो । ग्रामीण पद्वतिमा आधारित कार्य शैली अपनाई आएका गाउँहरुलाई गाउँपालिकामा आधारित मान्यतामा रुपान्तरण गर्नुछ । त्यसैले अहिले यो जुनिचाँदे गाउँपालिका योजनाबद्व तरिकाले बिभिन्न गाउँसभाबाट बिनियोजित बजेटको सम्झैता गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, सडक, यातायात, खानेपानी, सिचाई, लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखि भौतिक पूर्वाधारका कामहरु दु्रत गतिमा ११ वटा वडाहरुमा निर्माण चरणबद्ध अगाडि बढिरहेका छन ।
२ गाउँसभामा पारित योजनाहरु छनौट गर्दा जनसहभागिता कस्तो रहयो ? आगामि गाउँपालिकाले कस्तो परिकल्पना बोकेको छ ?
२०७४ असार २८ गतेबाट जुनिचाँदे गाउँपालिकाको गाउँसभा सुरु गरी ०७४ साउन १ गते सभा सम्पन्न गरियो । जनप्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागितामा बस्ती स्थरबाट योजना छनौंट गरी आम जनताकोे भावना अनुरुप गाउँ सभाबाट बजेट बिनियोजित गरियो । आगामि दिनमा जुनिचाँदे गाउपालिकालाई समृद्ध र सुन्दर गाउँपालिका निर्माणका लागि यस पालिका भित्र रहेका बहुमुल्य कायनाइट पत्थर खानी लगायत स्थानीय स्तरमा रहेका साधनस्रोतको ब्यापक रुपमा उपयोग गर्ने परिकल्पनाका साथ योजनाहरु अगाडि बढाइने छ । १५ वर्षको अवधि जनप्रतिनिधि बिहिनताको अबस्थाबाट अघि पुनसंरचित संरचनामा भएको निर्वाचनबाट चुनौतिपूर्ण निर्बाचित प्रतिनिधिहरु नयाँ जोश, जाँगर, प्रेणा र दृष्टिकोण लिएर आएको परिस्थीति हो । यस स्थितिमा सबैले सुन्दर गाँउ, उज्यालो गाँउ, हरियाली गाँउ, प्रत्येक वडामा नेटको सुविधा, बस्ति स्तर र एकीकृत योजना, शैक्षिक सुधार, भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन बृद्वि र बजार सम्मको पहुँच गर्ने खालका योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । साथै स्वच्छ सुन्दर जुनिचाँदे गाँउपालिका हाम्रो भविष्य भन्ने लक्ष्य राखेर सिढि चढ्ने कल्पना गरेको छ ।
२ गाउँपालिकाले कस्ता योजनाहरुलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ? हाल भईरहेका बिकास निर्माणका काममा जनता सन्तुष्ट छन् त ?
गाउँपालिकाले गाउँको पहिचान स्थापित गर्ने सबै वडाको सम्बन्ध ब्यवस्थित गर्ने आवागमनको लागि सडक यातायात ब्यबस्थापन गर्ने कृषि आधुनिकिकरण, लघु उद्यमको प्रवद्र्धन, स्थानीय स्रोत साधनको आधारमा उद्यमशिलता बिकास तालिमका आधारमा निर्माण गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि नमुना बिद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटनका आकर्षक गन्तब्यहरु पहिचान गरी पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने, हरियाली वनको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने खेल मैदानको ब्यवस्थापन, यातायात पार्किङ्ग ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता तमाम गाउँपालिकामा हरेक कार्यहरु निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिँदै जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सोही बमोजिम गाउँपालिका लागिरहेको छ । हालसम्म कतिपय योजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
३ तपाईको कार्यकालमा गाउँपालिकामा गर्नैपर्ने प्राथमिकताका प्रमुख योजना के छन् ?
हामीले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरु मध्ये पहिलो योजना भनेका गाउँपालिकाका सबै वड हरुलाई समेटि प्रत्यक वडा हरुका सडकको निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको केन्द्रमा समान पहुँच पुर्याउने गरि वडा चक्रपथ निर्माण गर्ने अहिलेका साबिकका वडाहरुमा नयाँ प्रबिधिहरुको प्रयोगमा सहजता ल्याउन टेलिफोन टावरको जडानको लागि नेपाल दुरसञ्चारसंग पहल गर्ने, प्रत्येक वडाहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रवद्र्वन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम प्रभाबकारी बनाउन घरघर र हात हातमा पुग्ने बितरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, नमुना बिद्यालय कार्यक्रममार्फत शैक्षिक केन्द्रका रुपमा गाउँपालिकालाई निर्माण गर्ने कृषिमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उद्यम लघु उद्यमको बिकास गर्ने समग्रमा पर्यावरण मैत्रि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना गरेको छु ।
संगसगै हाम्रो गाउँपालिकामा मध्यपश्चिमको सबै भन्दा ठुलो काईनाईट, तुर्मालिन, ग्रिन आदि लगायत खनिज प्रसस्त स्रोतको सम्भावना प्रयाप्त मात्रामा रहेको छ । खनिज उत्खननमा जोड दिने योजना छ । वन स्रोत अर्काे बलियो पक्ष हो । त्यसको सदुपयोगबाट गाउँपालिकाको भाबि श्रोत ब्यबस्थापन गर्ने कलपना रहेको छ । जडिबुटि हाम्रो अर्काे महत्व राख्ने श्रोत हो यि सबै श्रोतको ब्यबस्थापन गरी आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्रको बिकास गरी वेरोजगारी घटाउन पहल गरिने छ ।
सर्बप्रथम म यस गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले जुनिचाँदे गाउँपालिका भ्रष्टाचार मुक्त गाउँपालिका बनाउने योजनाका साथ हामी योजनाको प्रोफाईल बनाउने, नितिगत काम गर्दैछांै र स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि आगामी हिउदे अधिवेशनबाट केहि नीति ऐनहरु पारित गर्दैछौ । आन्तरिक राजश्वको लेखाजोखा पाँच वर्षसम्म काम गर्ने आवधिक योजना गर्नेछौ । गाउँ सभाबाट बिनियोजित बजेटमा तोकिए अनुसारका कामहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानेछौं । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, वातावरण, यातायात, खेलकुद, साँस्कृतिक सम्भावनाका क्षेत्रमा दीर्घकालिन गुरुयोजना निर्माण, मौलिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । नयाँ सँरचनामा जन प्रतिनीधिले निर्वाह गर्ने जनपक्षिय कार्यशैली र कार्यक्रमले जनतामा परिवर्तनको नौलो अनुभुति हुनेछ । यस अर्थमा जुनिचाँदे गाउँपालिकाले साँच्चिकै सिंह दरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा गएको अनुभुत जनतालाई गराउन पर्याप्त सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
४ गौरवका योजनाहरु मध्ये कार्यान्वयनका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
स्थानीय आर्थिक समृद्विलाई उठाउने गरी स्थानीय सम्वाद समिति गठन गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष संलगनतामा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना बनाएको छु । स्रोत बिनाको अधिकारको अर्थ रहदैन अधिकारको उचित प्रयोगका लागि श्रोतको आबस्यक प्रर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय स्रोत हाम्रो प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र हो । मजकोट खोला, गर्खाकोट खोला, बिरा खोला, आलि खोला, सिर्पा खोला, बढाखोला, सिउरेनि खोला जस्ता अविरल श्रोतहरु छन् सो खोलाबाट प्रयाप्त बिद्युत उत्पादन गरी गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने । तीनको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । संगसंगै हाम्रो गाउँपालिकामा काईनाईट, तुर्मालिन, ग्रिन आदि जस्ता खनिज प्रदार्थको सम्भावना प्रयाप्त मात्रामा रहेको छ । खनिज उत्खननमा जोड दिने योजना छ । वन स्रोत अर्काे बलियो पक्ष हो । त्यसको सदुपयोगबाट गाउँपालिकाको भाबि स्रोत ब्यबस्थापन गर्ने कल्पना रहेको छ । जडिबुटि हाम्रो अर्काे महत्व राख्ने श्रोत हो यी सबै श्रोतको ब्यबस्थापन गर्ने योजना बनाएको छु ।
५ गाउँपालिकामा पर्यटन बिकासको सम्भावना के –कस्ता छन् ?
यो गाउँपालिका समग्र जाजरकोट जिल्लामा पहिलो पनि हुन सक्छ किनकि सञ्चार माध्यमको कमी, प्रचार प्रसारमा कमि भएको कारणले यहाँका पर्यटकिय क्षेत्रको बाहिर खुल्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ । साथै आगामी दिनमा अध्ययन गरी प्रचार प्रसारमा जोड दिएको खण्डमा प्रचुर संभावना रहेको गाउँपालिका हो । जुम्ला र जाजरकोटको सिमानामा पर्ने चाँदे हिमाल वडा नं. १ शिद्ध गुफा, शिवालय, नारायण थान मन्दिर, सुनारगाउँ मष्ठा मन्दिर, जुनिचाँदे ४ मा रहेको मस्टो मन्दिर र भोटे राजाको पालामा निर्मित ढुङ्गे देवल र वडा नं. २ मा रहेको भौरीमालिका, भौरब नाथ मन्दिर, उचाइमा रहेको काकचोचा हिमाल, लौरी बिनायक ढाँभ सुन खानी, वडा न ११ देउराली गुफा, बासु धारा लगायत जुनिचाँदेको सबै भूभाग तथा सुर्खेत नेपालगञ्ज रुकुम लगायत मध्यपश्चिमका अधिकांस भुभागको प्रत्यक्ष निहालन सकिने पाथिभरे चुचुुरोलाई दृश्यावलोकन क्षेत्र बनाउने त्यहाँको पौराणीक्ता उजागर गर्ने साथै देबि देवताको उद्यगम थलो नदाई दह जस्ता क्षेत्रहरुको निर्माण, ब्यबस्थापन र प्रचार गर्न सकियो भने यहाको पर्यटन बिकास भई जुनिचाँदे गाउँपालिका समृद्वि बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने त्यसैले पर्यटन बिकासमा पनि जुनिचाँदे गाउँपालिको योजनामा समाबेस भएको क्षेत्र हो ।
६ गाउँपालिकाबाट विदेशीने युवाहरुलाई रोक्न कस्ता कार्यक्रम छन् ?
पहिलो कुरा त गाउँपालिकालले सबै बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन तर रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना मैले बनाएको छु । घर घर रोजगारी सिर्जना गरी गरिबि घटाई स्थानीय आर्थिक सम्बृद्वि प्राप्त गर्नु स्थानीय गाउँपालिकाको पहिलो कर्तब्य ठानेको छु । त्यसको लागि कृषि र श्रममा आधारित लघु उद्यम बिकास, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको बिकास जस्ता सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्नको लागि अहिले गाउँपालिकाबाट बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ ।
७ हजुरको कार्यकालमा यहाँका जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूती हुने गरी काम गर्नु हुन्छ ?
८ अन्तमा हजुरले केहि भन्नुछ ?